Ithegi: coronavirus | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 18, 2020 NgoLwesithathu, Matshi 18, 2020 Douglas Karr
Oku, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona ndawo ingaqhelekanga yeshishini kunye nekamva elithandabuzekayo endikhe ndalibona ebomini bam. Oko kwathethi, ndibukele usapho lwam, abahlobo, kunye nabaxhasi bohlulwa baba ziindlela ezininzi: Umsindo-oku, ngaphandle kwamathandabuzo, yeyona nto imbi kakhulu. Ndijonge abantu endibathandayo kwaye ndibahloniphayo ngomsindo ndibetha nje wonke umntu. Akuncedi nto okanye nabani na. Eli lixesha lokuba nobubele. Ukukhubazeka - abantu abaninzi balindile